नेकपाभित्र विवाद चलिरहेका बेला रअका प्रमुख किन आए काठमाडौँ ? — Imandarmedia.com
१०पार्टी फुटाउनेबारे प्रधानमन्त्री ओलीले दिए यस्तो
काठमाडौं । भारतीय गुप्तचर संस्था रअ का प्रमुख सामन्त कुमार गोयल एकाएक काठमाडौँ पुगेका छन् । उनि केही घन्टाको भ्रमणको लागि काठमाडौँ आएका छन् । उनी काठमाडौ आएको पुष्टि उच्च सुरक्षा स्रोतले गरेको छ ।
उनी के प्रयोजनका लागि भ्रमणका आएका हुन भन्ने यकिन भएको छैन् । नोभेम्बर पहिलो साता भारतिय सेना प्रमुख एमएम नरबाणेको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा उनी नेपाल आएका हुन् । भ्रमणका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपालस्थित भारतिय दुतावासले केही बताएको छैन ।
यस्तै यता अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीबीच भेटवार्ता भएको छ । भेटमा मन्त्री पौडेलले नेपाल-अमेरिकाबीचको सम्बन्धबारे चर्चा गर्दै अमेरिका सरकारले नेपालको विकासमा निरन्तर गर्दै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री र राजदूतबीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग, कोभिड-१९ महामारीको नियन्त्रण र सोपछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा हुने सहयोगलगायत विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राजदूत बेरीले अर्थमन्त्रीलाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना दिए । उनले अमेरिकाबाट प्राप्त हुने सहायता कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा केन्द्रित गरेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा अमेरिकी सरकारको सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका थिए ।
प्रचण्डले जवाफ दिनै पर्ने ओलीका यस्ता ३ प्रश्नः जनयुद्धका घाइतेको उपचारदेखि सम्पति छानविनसम्म
काठमाडौं आइपुगे चिनियाँ रक्षामन्त्री वेइ फेङ्हे, अन्तराष्ट्रिय बिमनास्थलमा ओर्लिएर के भने ?
नेकपाले गतिविधि बढाएको भन्दै हुम्लाका गाउँ-गाउँमा प्रहरीको गस्ती
कार्यकर्तालाई महाधिवेशनको तयारीमा लाग्न कांग्रेस नेता कोइरालाको निर्देशन
नेकपा हाइकमाण्ड बैठक बस्दै, ओलीले पनि राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्ने
ओली सरकारलाई चुनौती दिदै वैद्य माओवादीले गर्यो यस्तो कडा निर्णय
सरकारबिरुद्ध भ्रम फैलाइयो- ओली